June 2019 - Glamorous Icon
Monthly Archives: १३ असार २०७६, शुक्रबार १५:५४
Home›१३ असार २०७६, शुक्रबार १५:५४›१३ असार २०७६, शुक्रबार १५:५४
केही दिन अगाडि चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ हेर्नका लागि काठमाण्डौको कुमारी हल पुगेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराइले नायिका करिश्मा मानन्धर २ बर्षदेखि राजनीति र पार्टीमा सक्रिय नभएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए–‘उहाँलाई हामीले छुट्टी दिएका हौं । उहाँ एउटा राम्रो कलाकार हो । २ बर्षदेखि उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुनु भएको थिएन । उहाँले ...
बलिउडका भर्सटायल कलाकार नवाजुद्दिन सिद्धिकी अहिले ‘बोले चुडिया’ नामक चलचित्र निर्माणमा लागिरहेका छन् । हिट गीतबाट सापटी लिइएको यो नाममा राम्रै पैसा छाप्ने आशा उनको छ । यो चलचित्रलाई उनका भाइ समास सिद्धिकीे निर्देशन गर्दैछन् । यो चलचित्रका लागि सुरुवातमा नायिका तथा टेलिभिजन स्टार मौनी रोयलाई अफर गरिएको थियो । तर, मौनीले चलचित्रमा काम गर्ने ...
नायिका नम्रता श्रेष्ठ र नायक अनुप विक्रम शाहीको केमेष्ट्री कस्तो होला ? यसका लागि भदौको ६ गते रिलिज हुने चलचित्र ‘जाइरा’लाई नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चलचित्रको सार्वजनिक एक रोमान्टिक गीतले भने यी दुइको केमेष्ट्री छल्काएको छ । बिहिबार काठमाण्डौमा आयोजित कार्यक्रममा पनि नम्रता र अनुपको केमेष्ट्री गज्जबको देखियो । अनुप र नम्रताले सार्वजनिक गीतलाई ...
१३ असार २०७६, शुक्रबार १३:१०
सिन्धुपाल्चोकमा अभिभावक गुमाएका दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूलाई सिपमूलक तालीम र वासस्थान निर्माणका लागि रकम जुटाउन अस्ट्रेलियामा ‘सपोर्ट फर सेल्टर च्यारिटी इभेन्ट’ आयोजना हुने भएको छ । सिन्धुपाल्चोक नेत्र हीन सङ्घको सहयोगार्थ अस्ट्रेलियाको तासमनियामा रहेको तास इभेन्ट इन कर्पोरेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रम अस्ट्रेलियाका सात विभिन्न ठाउँमा कन्सर्ट आयोजना हुने छ । महानायक राजेश हमालको नेतृत्वमा हुन लागेको उक्त ...
अभिनेता आयुष्मान खुराना लामो समयदेखि आफ्नो लिकबाट हटेर फिल्म गरिरहेका छन् । आफ्नो पहिलो फिल्ममा स्पर्म डोनरको भूमिका निभाएका आयुष्मानले आफ्ना हरेक फिल्ममा परम्परागत एक्टरभन्दा भिन्न रोल निभाएका छन् । फिल्म ‘दम लगा के हइशा’ मा बडी शेमिङ जस्तो मुद्धामा फिल्म गरेर उनले निकै तारिफ बटुलेका थिए । आयुष्मानले आफ्नो पछिल्लो सबै फिल्ममा यस्तो मुद्धा ...
आज शुक्रबार २ नेपाली चलचित्र रिलिज भएका छन् । ‘आप्पा र किर्तिपुर’ औषत प्रचारका साथ हलमा लागेका हुन् । यसैविच, बाबु र छोराको कथालाई उठान गरेको चलचित्र ‘आप्पा’को बिहिबार बेलुकी काठमाण्डौको जय नेपाल हलमा प्रिमियर गरिएको छ । बाजा बजाएरै गरिएको प्रिमियरमा चलचित्र क्षेत्रका हस्तीहरु सहभागी थिए । नायक दयाहाङ राई आफ्नो परिवारसँगै हलमा पुगेका ...
एक छोरा र पिताको भावनात्मक सम्बन्धको कथा वाचन गर्ने फिल्म ‘आप्पा’ र तत्कालिन राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरणको अभियानमा १८ औं शताब्दिमा कीर्तिपुरमा गरेको आक्रमणको कथामा आधारित भएर निर्माण भएको फिल्म ‘कीर्तिपुर’ शुक्रबारबाट देशभरका हलमा एकसाथ प्रदर्शनमा आएका छन् । ‘आप्पा’ का निर्देशक अनमोल गुरुङ हुन् । भने, ‘कीर्तिपुर’ लाई प्रदीप खड्गीले निर्देशन गरेका हुन् । ...
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर एसइइ परिक्षामा बी प्लसमा उत्तिर्ण भएकी छिन् । बिहिबार सार्वजनिक एसइइको परिक्षाफलमा नेपाली फिल्म क्षेत्रकी सदाबहार सुन्दरी अभिनेत्री मानन्धर उत्तिर्ण हुन सफल भएकी हुन् । गत सालको एसइइ परिक्षामा सहभागी भएकी करिश्मा परिक्षाफललाई लिएर निकै चिन्तित थिइन् । अन्ततः उनी पास हुन सफल भइन् । करिश्माले २०७५ सालको अन्तिममा परिक्षा दिएकी थिइन् ...
भाद्र ६ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारी गरिरहेको चलचित्र ‘जाइरा’को गीत ‘आँखैले बोल्छ’ सार्वजनिक भएको छ । सन्तोष लामाको आवाज रहेको गीतमा कल्याण सिंहको सङ्गीत र रवि मल्लले शब्द रहेको छ । साथमा गीतको भिडियोमा चलचित्रकाका मुख्य कलाकार नम्रता श्रेष्ठ र अनुपविक्रम शाही फिचर्ड छन् । गीतमा नम्रता र अनुपको प्रेमलाई निकै सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गरिएको ...
Model Renuca Singh Thakuri loves to be in front of the camera. Ever since she wasachild and fascinated by the world of fashion, she always wanted to beamodel. She told ‘The most challenging part is when you have to change your personality with every costume change. You can’t be static in ...